Soosaarka Shiinaha iyo Fluorobenzene | Freemen
CAS Maya: 462-06-6
Muuqaal: Dareere saafi ah oo aan midab lahayn
Daahirnimo (GC): 99.9% min
200kg / durbaan, 16Mt / FCL, 22mt / taangiga ISO
UN No.2387, Fasalka: 3, Kooxda xirxira: II
Used Waxaa loo adeegsaday guud ahaan warshadaha, dawooyinka, elektaroonigga;
☑ Badeecada waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta aaladaha ceyriinka ah ee dawooyinka cudurka dhimirka, sida fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, iwm. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa aqoonsiga sunta cayayaanka, dila ukunta, caagaga iyo polymerka xarkaha. Uumiga fluorobenzene ee leh γ - chlorobutyryl chloride ayaa soo saari kara γ - chloro-p-fluorophenone, oo loo isticmaalo soo saarista haloperidol waana daroogada ugu badan ee loo isticmaalo daawada butyrylbenzene antipsychotics.
Industry In warshadaha elektarooniga ah, Waxaa loo isticmaalaa baytariyada leh xirmo gaar ah, qoyaan si adag loo xakameeyo; Fluorobenzene ma xoojin karto oo kaliya isdhexgalka u dhexeeya Li + iyo DME, laakiin sidoo kale waxay xakameyn kartaa burburka DME illaa xad; Intaa waxaa sii dheer, fluorobenzene waa lagu yareyn karaa dusha sare ee lithium anode si loo sameeyo LIF, oo si dhakhso leh u heli kara lakabka ilaalinta isku xirnaanta cufan. Iyadoo lagu saleynayo astaamahan laba-geesoodka ah, fiirsashada korantada sare leh ee lagu qasi jiray fluorobenzene ma aha oo kaliya inay si weyn u wanaajin karto xasilloonida iyo wax-ku-oolka coulomb ee lithium anode (celceliska waxqabadka coulomb waa 99.3% marka wareegga xasilloonida uu ka badan yahay 500 wareeg), laakiin sidoo kale waa la isticmaali karaa taxane ah xaalado tijaabo ah oo buuxa oo batari ah (oo ay kujiraan awooda dusha sare, jawiga heerkulka hooseeya, cufnaanta sare ee hada jirta, Waxqabadka baaskiil ee ugufiican waxaa laguhelay maadada elektrolytka oo hooseysa iyo aat-al-lithi lithium anode);
P Nadiifnimo sare oo aan caadi ahayn fluorobenzene ayaa si guul leh loogu isticmaalay elektroolka baytariyada lithium-ion. Marka la barbardhigo elektroolka caadiga ah ee ay kujirto kaarboonat, waxqabadka baytariyada lithium-ion ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo lagu daro xaddi badan oo fluorobenzene ah, oo leh faa iidooyin muuqda marka la eego waxqabadka heerkulka hooseeya, nolosha batteriga iyo awoodda dheecaan heerkulka sare. Fluorobenzene ayaa laga yaabaa inay biyo u keento habka wax soo saarka, gaadiidka iyo keydinta. Haddii cabirka biyuhu aad u badan yahay, waxay saamayn ku yeelan doontaa biyaha ku jira batroolka lithium-ion. Biyaha aad u sarreeya waxay saameyn gaar ah ku leeyihiin waxqabadka korontada kiimikada. Guud ahaan, biyaha ku jira elektroolka ayaa si adag loo xakameynayaa;
Badeecad ay ansixiyeen shirkadaha dawooyinka;
Badeecada waxaa u ansixiyay macaamiisha Jabbaan adeegsiga elektarooniga ah. Waxaan leenahay tiknoolajiyad looga takhaluso qoyaanka xagga wax soo saarka, xirxirida iyo gaadiidka, si loo hubiyo tayada;
Eli Bixinta-Waqtiga-keliya: 1 toddobaad laga joogo bakhaarka Shanghai;
☑ warshaddu waxay kudhowdahay isha HF, sidaas darteed si loo yareeyo qiimaha loona hubiyo sii wadida wax soo saarka;
Hore: Aashitada 'Crotonic Acid'